မတ်လ 2014 ခုနှစ်တွင်သုတေသီများ Encore, Real-time နှင့်အင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်းတာပေးမယ့်စနစ်ကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုနားလည်ရန်, ဖွင့် (သင်တဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ကြပါလျှင်, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးနိုငျသညျ) သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏အခြေအနေတွင်စဉ်းစားကြကုန်အံ့။ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစဉ်းစားရန်တလမ်းတည်းကို html ဘာသာစကား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကသင်၏ website ကိုသွားရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသင့် html အစီအစဉ်ဖြင့် download ပြီးတော့သူမ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြန်ဆို။ ထို့ကြောင့်သင်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာညွှန်ကြားချက်အခြို့အစုံလိုက်လျှောက်ရန်အခြားလူများရဲ့ကွန်ပျူတာများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်တတ်နိုင်သော program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, ဂျော်ဂျီယာ Tech မှမှာသူသုတေသီများ, ဆမ်ဘားနက်နဲ့နစ်ခ် Feamster, မိမိတို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေစတဲ့သေးငယ်တဲ့ code ကို SNIPPIT တပ်ဆင်ရန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင်များကိုအားပေးအားမြှောက်:
သင်က၌ဤ code ကို SNIPPIT နှင့်အတူတစ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လိုလျှင်ဒီမှာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ယျ။ သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုအဝက်ဘ်စာမျက်နှာ rending စဉ်တွင်, code ကို SNIPPIT သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုတေသီစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြကြောင်း website တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားစေမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တကပိတ်ပင်ထားသည့်နိုင်ငံရေးပါတီသို့မဟုတ်ညှင်းဆဲဘာသာရေးအုပ်စုများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကအလားအလာပိတ်ဆို့ဝက်ဘ်ဆိုက် (ပုံ 6.2) ကိုဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သုတေသီပြန်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ html အရင်းအမြစ်ဖိုင်ကို check လုပ်ထားမဟုတ်လျှင်ထို့ပြင်ဤအမှုအားလုံးသည်သင်မမြင်ရတဲ့လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောမမြင်ရတဲ့ Third-party စာမျက်နှာတောင်းဆိုမှုများကို web ပေါ်အမှန်တကယ်အတော်လေးဘုံများမှာ (Narayanan and Zevenbergen 2015) , ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိသလောက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အကဲဆတ်သောကြိုးစားမှုပါဝငျသညျ။
ပုံ 6.2: Encore ၏သုတေသနဒီဇိုင်းသိထား။ ဇာစ်မြစ်ကို website ကိုသငျသညျအထဲတွင် embedded သေးငယ်တဲ့ code ကိုအတိုအထွာ (ခြေလှမ်း 1) နှင့်အတူ html ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာအားပေးပို့သည်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် (ခြေလှမ်း 2) ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာ, ပြန်ဆို။ တစ်ဦးပိတ်ပင်ထားသည့်နိုင်ငံရေးအုပ်စု (ခြေလှမ်း 3) ၏ website ကိုဖြစ်နိုင်သည့်တိုင်းတာခြင်းပစ်မှတ်, access ရန်သင့်ကွန်ပျူတာကြိုးစားမှု။ ထိုကဲ့သို့သောအစိုးရအဖြစ်တစ်ဦးကဆင်ဆာ, ထို့နောက်တိုင်းတာခြင်းပစ်မှတ် (ခြေလှမ်း 4) ရန်သင့် access ကိုပိတ်ဆို့စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုတေသီ (ထိုကိန်းဂဏန်းမှာပြထားတဲ့မဟုတ်) မှဤတောင်းဆိုမှုကို၏ရလဒ်များကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ကနေပုံ Burnett and Feamster (2015) ။
ဒီချဉ်းကပ်မှုဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတိုင်းတာဘို့အချို့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တိလည်းရှိတယ်။ လုံလောက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များဒီ code ကို SNIPPIT ထည့်ပါလျှင်, ထိုသုတေသီများကဝက်ဘ်ဆိုက်များသောနိုင်ငံများအားဖြင့်ဆင်ဆာထားတဲ့တစ်ဦးကို real-time, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ-စကေးတိုင်းတာရှိနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းကိုစတင်ခင်မှာ, သုတေသီဂျော်ဂျီယာ Tech မှမှာ IRB နှင့်အတူတိုင်ပင်, ထိုသို့အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းအောက်မှာ "လူ့ဘာသာရပ်များသုတေသနလုပ်ငန်း" မဟုတ်ခဲ့သောကြောင့်, IRB စီမံကိန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ငြင်းဆန် (ထိုအဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေအများဆုံးဗဟိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုခံရတဲ့အုပ်ချုပ်စ​​ည်းမျဉ်းများအစုဖြစ်ပါသည် US မှာသုတေသနလုပ်ငန်း; နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်, ဤအခနျးရဲ့အဆုံးမှာသမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲတွင်ကြည့်ပါ) ။
Encore စတင်ခဲ့မကြာခင်မှာပဲပြီးနောက်, သို့သော်, သုတေသီစီမံချက်၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်စရာသောသူထို့နောက်ဘွဲ့ရကျောင်းသား, ဘင် Zevenbergen ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, အချို့သောနိုင်ငံများရှိလူတို့သည်မိမိတို့ကွန်ပျူတာအချို့သောအထိခိုက်မခံတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသွားရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့နှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ထိတွေ့ခံရခဲ့သောဤလူများလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီဘူးလျှင်အန္တာရာယ်နှင့်ထိတွေ့နိုင်မယ့်စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ ဤဆိုဒ်များဝင်ရောက်ဖို့ Third-party ကြိုးစားမှုသာမန် web browsing အတွက် (က Facebook ကလိုပဲ Button လေးနှင့်အတူဥပမာတိုင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာစဉ်အတွင်းဘုံကြောင့်ဤစကားဝိုင်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအ Encore အသင်းက Facebook, Twitter နှင့် YouTube ၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်သာကြိုးပမ်းရန်စီမံကိန်းကိုအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် ) ကို Facebook မှတစ်ဦး Third-party တောင်းဆိုမှုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဒီဇိုင်းကိုသုံးပြီး data ကိုစုဆောင်းပြီးနောက်, နည်းစနစ်နှင့်အချို့သောရလဒ်များကိုဖော်ပြစက္ကူ SIGCOMM, တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကွန်ပျူတာသိပ္ပံကွန်ဖရတင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကော်မတီစက္ကူနည်းပညာဆိုင်ရာအလှူငွေတန်ဖိုးထားပေမယ်သင်တန်းသားများထံမှသဘောတူချက်၏မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထို program ကော်မတီကဒါပေမယ့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖော်ပြတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကြေညာချက်နှင့်တကွ, စက္ကူထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် (Burnett and Feamster 2015) ။ ထိုသို့သောလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကြေညာချက် SIGCOMM မှာမတိုင်မီအသုံးပြုခဲ့ဖူး, ဤကိစ္စတွင်မိမိတို့အသုတေသနကျင့်ဝတ်၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအားဖြင့်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့ဦးဆောင်ထားပြီး (Narayanan and Zevenbergen 2015) ။